08/18/13 ~ Myanmar News Updates
9:18:00 PM Myanmar News Updates No comments
9:13:00 PM Myanmar News Updates 1 comment
အခါတပါးမြတ်စွာဘုရားထံတော်သို့(၉)မျိုးသော နတ်တို့သည် စုရုံးရောက်ရှိလာ၍
၎င်းတို့ ၏ ကုသိုလ်ကြောင့် ဖြစ်ရသော နောင်တ ကို လျှောက်တင်ကြလေ၏။
(၁) အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ ဟာသံဃာတော်များကို ရှိခိုးနေရာပေးသော်လည်း ခရီးဦးကြိုခြင်းမရှိခဲ့ပါ
ထို့ ကြောင့် နိမ့်ကျသော ဘုံဘ၀ ကို ရကြပါတယ် ဘုရား။
(၂)အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ ဟာ သံဃာတော်များကိုခရီးဦးကြိုသော်လည်း နေရာပေးသော်လည်း
ရှိခိုး ခြင်း မပြုခဲ့မိပါဘုရား။ ထို့ ကြောင့် ဘုံဘ၀ နိမ့်ကျခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။
(၃)အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ ဟာ သံဃာတော်များကို ခရီးဦးကြိုခြင်း ရှိခိုးခြင်းပြုသော်လည်း
နေရာထိုင်ခင်း မပေးခဲ့မိပါဘုရား။ ထို့ ကြောင့် နိမ့်ကျသော ဘုံဘ၀ ကို ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။
(၄)အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ ဟာသံဃာတော်များကို ခရီးဦးကြိုခြင်း။ရှိခိုးခြင်း။နေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်းကို
ရွက်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း စွမ်းနိုင်သလောက် မလှူခဲ့ပါဘုရား။ထို့ကြောင့် နိမ့်ကျသော ဘုံဘ၀ ကိုရခြင်း
(၅)အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ ဟာသံဃာတော်များကိုခရီးဦးကြိုခြင်း။ရှိခိုးခြင်း။နေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်း။
စွမ်းနိုင်သလောက် လှူဒါန်းခြင်းများ ပြုခဲ့သော်လည်းတရားတော်ကိုနာကြားခြင်းမပြုခဲ့ပါဘုရား။
ထို့ ကြောင့် ဘုံဘ၀ နိမ့်ကျ ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။
(၆) အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ ဟာသံဃာတော်များကိုခရီးဦးကြိုခြင်း။ရှိခိုးခြင်း။နေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်း။ စွမ်းနိုင်သလောက် လှူဒါန်းခြင်း ။တရားတော်ကိုနာကြားခြင်းများ ပြုခဲ့သော်လည်း ထိုတရားတော်ကို
သေချာနားစိုက်၍နာကြားခြင်းများ မရှိခဲ့ပါဘုရား ။ထို့ ကြောင့် ဘုံဘ၀ နိမ့်ကျခြင်း ဖြစ်ရပါတယ်ဘုရား။
(၇)အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ ဟာသံဃာတော်များကိုခရီးဦးကြိုခြင်း။ရှိခိုးခြင်း။နေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်း။ စွမ်းနိုင်သလောက်လှူဒါန်းခြင်း။တရားတော်ကိုနာကြားခြင်း။သေချာနားစိုက်နာကြားခြင်း။
ပြုခဲ့သော်လည်း မှတ်သား ဆောင်ထားခြင်း မရှိခဲ့ပါ ဘုရား။
ထို့ ကြောင့် ဘုံဘ၀ နိမ့်ကျရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။
(၈) အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ ဟာသံဃာတော်များကိုခရီးဦးကြိုခြင်း။ရှိခိုးခြင်း။နေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်း။ စွမ်းနိုင်သလောက်လှူဒါန်းခြင်း။တရားတော်ကိုနာကြားခြင်း။ထိုတရားတော်ကိုသေချာ
နားစိုက်နာကြားခြင်း။ မှတ်သားဆောင်ထားခြင်းများ ပြုခဲ့သော်လည်းတရားတော်များကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်
ခြင်း မပြုခဲ့မိပါဘုရား။ထို့ကြောင့် ဘုံဘ၀ နိမ့်ကျခြင်းပါဘုရား။
(၉) အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ ဟာသံဃာတော်များကိုခရီးဦးကြိုခြင်း။ရှိခိုးခြင်း။နေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်း။ စွမ်းနိုင်သလောက်လှူဒါန်းခြင်း။တရားတော်ကိုနာကြားခြင်း။ထိုတရားတော်ကိုသေချာနားစိုက်နာကြား
ခြင်း။မှတ်သားဆောင်ထားခြင်း။စဉ်းစာဆင်ခြင်ခြင်းများ ပြုခဲ့သော်လည်း အားမထုတ်ခဲ့မိပါဘုရား။
ထို့ ကြောင့် ဘုံဘ၀ န်ိမ့်ကျနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဘုရား ။
အစရှိသဖြင့် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အား အသီးသီးလျှောက်ထား ကြလေသည်။
ထိုနတ်သားတုိ့၏ လျှောက်ထားချက်ကိုအကြောင့်ပြု၍ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်က
" ချစ်သားတို့ ...ကုသိုလ်ပြုပါက ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြစ်အောင် ကုသိုလ်ပြုပါ " ဟူ၍ မိန့် တော်မူလေ၏။
ကုသိုလ်ပြုသူသည် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြုသင့်လှပါသည်။ အထက်ဖေါ်ပြပါ အတိုင်း
၇။ထိုတရားတော်ကိုအာရုံပျံ့ လွှင့်မှူမရှိပဲ နာကြားခြင်း ။
၈။ထိုတရားတော်တို့ ၏ ဆိုလိုသည့်အဓိပ္ပါယ်ကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန် စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်း။
၉။တရားတော် မှ ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း.............စသဖြင့် ပြီးပြည့်စုံအောင်
ရွက်ဆောင် ပြုလုပ်သင့်ပါကြောင်း မှတ်သားမိသည့်အနှစ်သာရ ကို ရေးသားတင်ပြအပ်ပါသည်။
အသင်...အသက်ကြီးနေပြီ သဘောထား မကြီးနိုင်သေးဘူးလား?
အသင်...ဆံပင်တွေ ဖြူနေပြီ စိတ်ထားမဖြူနိုင်သေးဘူးလား?
အသင်...ဆံပင်တွေကျွတ်နေပြီ အကျွတ်တရား မရနိုင်သေးဘူးလား?
အသင်...ထိပ်ပြောင်နေပြီ ကိလေသာ ပြောင်အောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးလား?
အသင်...မျက်စိ မှူန်နေပြီ တရားအတွက် စမ်းတ၀ါးဝါး ဖြစ်နေတုံး ပဲလား?
အသင်... နားထိုင်းနေပြီ တရားနာဖို့ ထိုင်းမှိုင်းနေတုံးပဲလား?
အသင်...အသက် ရှူသံ ချို့ တဲ့နေပြီ အာနာ ပါန လုပ်ဖို့ ချို့ တဲ့နေတုံး ပဲလား?
အသင်...လျှာထူနေပြီ မကောင်းမှူမှာ ထူပူနေတုံးပဲလား?
အသင်...သွား ကျိုးနေပြီ မာန်မာန မကျိုးနိုင်သေးဘူးလား?
အသင်...ပါးစပ် ရွဲ့ နေပြီ ကုသိုလ် ကိုအရွဲ့တိုက်နေတုံးပဲလား?
အသင်...အသံပြာနေပြီ ခုထိ ဗျာ များနေတုံးပဲလား?
အသင်...လက်တွေတုန်နေပြီ ပုတီး ကိုင်ဖို့ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေတုံးပဲလား?
အသင်...ခြေထောက်တွေ ယိုင်နေပြီ အမှားဘက်ကို ယိုင်နေတုံးပဲလား?
အသင်...အသားအရေတွေ တွန့် နေပြီ ကုသိုလ် လုပ်ဖို့ တွန့် နေတုံးပဲလား?
အသင်...ခါးကိုင်းနေပြီ ရတနာ သုံးပါးကို မကိုင်းရှိုင်းနိုင်သေးဘူးလား?
အသင်...စိတ်တွေဝေနေပြီ ၀ိပဿနာလုပ်ဖို့တွေဝေနေတုံးပဲလား?
ဦးထောင်ဘိုအဝိုင်းတွင် BELTA ယာဉ်ကို ခရီးသည်တင်ယာဉ် ဝင်တိုက်
8:56:00 PM Myanmar News Updates No comments
ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် ဦးထောင်ဘို အဝိုင်းအနီးတွင် သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နံနက် ၈ နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့်က ဗဟန်း ၃ လမ်းဘက်မှ ရွှေတိဂုံ ဘုရားဘက်သို့ မောင်းနှင်လာသော BELTA ယာဉ်ကို ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းပေါ်မှ ဆူးလေဘုရားဘက်သို့ မောင်းနှင်လာသည့် မြောက်ဒဂုံ - ဆူးလေပြေးဆွဲနေသော BM ယာဉ်က ဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ကြုံသူများက ပြောကြားသည်။
အတိုက်ခံရသည့် BELTA (၄ဃ/၄၅၀၂) ယာဉ်ကို မောင်းနှင်လာသူမှာ အသက် ၆၀ အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဗဟန်း ၃ လမ်းဘက်မှ ရွှေတိဂုံ ဘုရားဘက်သို့ မောင်းနှင်လာရာ ဦးထောင်ဘိုအဝိုင်းကို ပတ်စဉ် ရွှေဂုံတိုင်ဘက်မှ ဆူးလေဘုရားဘက်သို့ မောင်းနှင်လာသည့် အမှတ် ၂၅၅ BM (သ/၆၈၂၂) ဘတ်စ်ကားက အရှိန်မထိန်းနိုင်ဖြစ်ကာ BELTA ယာဉ်၏ ညာဘက် ရှေ့တံခါးကို တိုက်မိခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်များက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
“အတိုက်ခံရတဲ့ အဘွားကြီးက ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ သတိလက်လွတ် ဖြစ်သွားတယ် ထင်တယ်။ ကားကအဝိုင်းကိုပတ်ပြီး တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောက ပလက်ဖောင်းပေါ်အထိ ရောက်သွားတယ်။ ကားမှာ လေအိတ် ပါတာကြောင့် ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်မှုမရှိဘူး။ ခဏတော့ သတိမေ့သွားတယ်” ဟု အသက် ၄၀ အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်လျှင် ဖြစ်ချင်း အနီးအနားရှိ အမှတ် (၁) မော်တော်ယာဉ်တပ်ရင်းမှ တပ်မတော်သားအချို့ ရောက်လာပြီး ယာဉ်တိုက်ခံရသူ အမျိုးသမီးကြီးကို ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားသည့် အနီးအနားတွင် တာဝန်ကျသည့် ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ယာဉ်စည်းကမ်းအရဆိုရင် အဝိုင်းကို ပတ်နေတဲ့ကားကို ဦးစားပေးရမှာပါ” ဟု ယာဉ်ထိန်းရဲက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲစခန်းသို့ ယနေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီခန့်က သွားရောက်မေးမြန်းရာ ဘတ်စ်ကား ယာဉ်မောင်းကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ယာဉ် (ပ) ၃၅/၁၃၊ ပုဒ်မ ၂၇၉/၃၃၈ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း၊ ကျန်သည့် အချက်အလက်များကို အမှုစစ်ထံတွင် ဖုန်းဆက် မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း အဆိုပါရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြန်လည် ဖြေဆိုသည်။
အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြို့က အဲလ်ဖက်တီ ဗလီ ထဲမှာ ခိုအောင်း နေကြတဲ့ မွတ်ဆလင် ညီနောင်များ အဖွဲ့ကို ထောက်ခံသူ လူ ၁၀၀ လောက်ကို လုံခြုံရေး တွေ ကနေ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ၊ သေနတ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ် ဖြိုခွင်း မှုတွေ ပြုလုပ် နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ကနေ အဓိက ဗလီ မျှော်စင် ဘက်ကို ပစ်ခတ် နေတာကို နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံကနေ ပြသသွား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ဒါဟာ ဗလီထဲ ကနေ ပစ်ခတ် နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ အစိုးရ ရုပ်သံဌာန ဖြစ်တဲ့ MENA က ပြောပါတယ်။
သောကြာနေ့ ညတုန်း ကတော့ စစ်သားတွေ ကနေ ဒီ ဗလီထဲ ဝင်ပြီးတော့ အထဲက လူတွေ ထွက်ကြဖို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ လူတွေ မထွက်ကြဖို့ ပြောတဲ့ လူ တခိျု့ ကိုတော့ လုံခြုံရေး တွေက ဖမ်းဆီးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။
အာဏာပိုင် တွေဟာ မွတ်ဆလင် ညီနောင်များ အဖွဲ့ကို ထောက်ခံ သူတွေ အနေနဲ့ နောက်ထပ် စခန်းချ ဆန္ဒပြ တာတွေ ထပ် မလုပ်ရ လေအောင် အဆောက် အဦး အာလုံးကို ထိန်းထား နိုင်ဖို့ကို လုပ်ဆောင် နေတာလို့ ကိုင်ရို မှာ ရှိတဲ့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက် ပြောပါတယ်။
8:48:00 PM Myanmar News Updates No comments
ကိုယ်ကောင်းရင် ကောင်းသလို ညံ့ရင်ညံ့သလို ဝေဖန်ခံရမှာပဲ ဆိုတဲ့ အိချောပို
8:47:00 PM Myanmar News Updates No comments
ပေါက်ကား ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက် ပြီး အခုနောက်ပိုင်း ဆိုရင်လည်း ချောရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ဆန်းတယ်။
ထွက်တော့ မထွက်သေး ပါဘူး။ ကိုပြေတီတို့၊ ကိုနေတိုးတို့နဲ့ ရိုက်ထားတာပါ။ အဲဒီကားလေးတွေ ထွက်လာရင်လည်း ပရိသတ်တွေ ကြိုက်ကြမှာပါ။
ကိုယ်လုပ်တဲ့ ပေါ်မှာ မူတည်တာလေ။ ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှု ပဲပေါ့။
ကိုယ်ညံ့သွား ရင်တော့ ညံ့သ လိုထွက်လာမှာ ပဲလေ။
အဲဒါကြောင့် မို့ ဒါက ပရိသတ်ရဲ့စကားသံပဲ စောင့် ကြည့်ရမှာပေါ့။
ကားတစ်ကား ပေါက်တာ မပေါက်တာ ဘာတွေ များကွာခြားသေးလဲ ဆိုရင်
အားလုံး တက်ညီလက်ညီနဲ့ အပေးအယူတွေ မျှကြဖို့ရယ်
နောက်ပြီးတော့ ဇာတ် လမ်းလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ
အံဝင်ခွင်ကျ ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုး လေးဖြစ်ဖို့ရယ်
လို့တော့ အိချောထင် တယ်။
ပြီးတော့ ဆန်းတဲ့ပြကွက်က လေးတွေလို့တော့ ထင်တယ်။
တချို့ ကားလေးတွေ ကျတော့လည်း မ ပေါက်ဘူး။
ဒါပေမဲ့လည်း ပရိသတ် ကြိုက်လားဆိုတော့ ကြိုက်ကြတယ်။
အဲဒီလိုဇာတ်လမ်း မျိုးလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ပေါက်တာကကျတော့ လည်း လူတိုင်းပါးစပ် ဖျားမှာကို
အဲ ဒီကားကဆိုပြီး ဖစ်သွားတာလေ။
နိဗ္ဗာန် အကျိုးမျှော်ပြီး .... နိူးဆော် လိုက်ရပါသည်.....
8:06:00 PM Myanmar News Updates No comments
ရဲရဲတောက် တိုက်ပွဲဝင် သူရဲကောင်းအပေါင်းတို့ .....
ဒီမိုကရေစီရေး အတွက် တောင်းဆိုသည်ဖြစ်စေ.....
ဆိုရှယ်လစ်ရေး အတွက် တောင်းဆိုသည်ဖြစ်စေ......
ကွန်မြူနစ်ရေး အတွက် တောင်းဆိုသည်ဖြစ်စေ.....။
လက်နက်ဆိုလို့.....
ကြွေးကြော်သံ တစ်ချက်မအော်ပဲ ......
ချိုးဌက်တို့မိုးပေါ်မှဝဲပျံ အဖော်ပြု ....
တိုက်ပုံနှင့် အမျိုးသား ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်ထားသည်ဖြစ်စေ......
ဂျင်းဘောင်းဘီ နှင့် တီရှပ် ကို ၀တ်ဆင်ထားသည်ဖြစ်စေ....
စွပ်ကျယ်နှင့် ပုဆိုးစုတ်ကို ၀တ်ဆင်ထားသည်ဖြစ်စေ.......
ရှေ့ ဆက်တက်မလာရန် အမိန့် ပေးနေသော.....
တပ်မတော် တပ်ဖွဲ့ တစ်ခု၏ ကိုက်တစ်ရာအတွင်းသို့ .....
မည်သည့် အကြောင်းပြချက်နှင့်မှ ....
နိဗ္ဗာန် အကျိုးမျှော်ပြီး ....
သူတော်ကောင်း အပေါင်းတို့ ......
( ငြိမ်းချမ်းရေးသမား ရဲမိုး)
အသက် (၁၈) နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကမ်းခြေမှာ ရေကူးရင်းငါးမန်းကိုက်
အသက် (၁၈) နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကမ်းခြေမှာ ရေကူးရင်းငါးမန်းကိုက်(သတင်း/ဓာတ်ပုံ)
ငါးမန်းအကြောင်း ကျွန်တော်တော့ သိပ်မသိပါဘူး..။ မသိဆို တောင်ပေါ်သား ဆိုတော့ကာ ပင်လယ်နဲ့ ဝေးဝေးမှာနေရတာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. အောက်က ပုံထဲမှာပါတဲ့ကောင်မလေး Bruna Gobbi ဆိုတဲ့ အသက် (၁၈) နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ဟာ ဘရာဇီးနိုင်ငံ Viagem ကမ်းခြေမှာ ရေကူးနေခဲ့ပါတယ်...
ရုတ်တရက်ဆိုသလို အဆိုပါ ကောင်မလေး ရေနစ်သွားခဲ့ပြီး ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ အသက်ကယ်လှေတစ်စင်းက ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်. ဒါပေမယ့် သူမဟာ တစ်ကယ်တော့ ရေနစ်နေတာ မဟုတ်ပဲ ငါးမန်းတစ်ကောင်ရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတာပါ..။ ကံကောင်းစွာပဲ သူမဟာ အသက်မသေခဲ့ပေမယ့် ခြေထောက် တစ်ချောင်းကိုတော့ ဆုံးရှုံးရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
နိုင်ပွဲရ စာရင်းမှာ အာဆင်နယ် ပါမလာတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁
7:40:00 PM Myanmar News Updates No comments
ပရီးမီးယားလိဂ်ကို လီဗာပူးနဲ့ စဖွင့်တော့ စတာရစ်က သူ့ကိုယ်သူ သက်သေပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့
ဒီအောင်ပွဲမှာ မစ်နိုလတ်အတွက် တီးတဲ့ လက်ခုပ်သံတွေက ပိုကျယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ မငြင်းဘူးမလား။ ပွဲချိန် ၈၈မိနစ် ရောက်နေတဲ့ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဂျိုနသန်ဝေါ်တာ ကန်တဲ့ပင်နယ်တီကိုသာ သူ မပုတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ရင် လီဗာပူးအတွက် အဖွင့်လှစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
ဒီနောက်မှာ အမြောက်တပ်ကြီးရဲ့ အိမ်ကွင်းရှုံးပွဲကြောင့် ပရိသတ်တွေ တောက်တစ်ခေါက်ခေါက် ကျန်ခဲ့ရတယ်။ ၆မိနစ်မှာ ဂီရောက်ဒ်ရဲ့ အဆုံးသတ် သေချာမှုနဲ့ ဂိုးစရခဲ့လို့ ပျော်ရမလိုရှိသေး ပင်နယ်တီ ပေးခဲ့ရပြီး ဘန်တီကီ ကန်တာကို ရှက်ဇီနီ ပုတ်ထုတ်နိုင်ပေမယ့် ထပ်ဆင့်ခေါင်းတိုက်ချက်ကြောင့် ချေပဂိုး ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနောက်မှာ ကီရန်ဂစ်ဘ်လည်း အကွဲအပြဲနဲ့ လူစားလဲခဲ့ရသလို နောက်တစ်ဂိုးလည်း ထပ်ပေးခဲ့ရပြန်တာပေါ့။
ဒီဂိုးကိုလည်း ပင်နယ်တီကနေ ဘန်တီကီက သွင်းခဲ့ပြီး ကိုစီယယ်နီ ထုတ်ပယ်ခံရ၊ ဒီနောက်မှာ ဗီလာအတွက် နောက်ဆုံးဂိုးကို လူနာက သာသာယာယာ သွင်းခဲ့ပြီး အပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက်မပိတ်မီ ၁၇ရက်အလိုမှာ ကစားသမားသစ်ခေါ်ဖို့ အာစင်ဝင်းဂါးကို သတိပေးခဲ့ပါပြီ။
မန်ယူ နိင်ပေမယ့် ရွန်နီ အောင်ပွဲမခံခဲ့ဘူး
ရာသီကြို ခြေစမ်းပွဲ ရလဒ်ဆိုးတွေကြောင့် ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ ဒေးဗစ်တစ်ယောက် အခုချိန်မှာ ဝေဖန်သံတွေကို တိတ်စေခဲ့ပါပြီ။ ရင်ဘတ်နဲ့ထိန်းပြီး မြေမကျကန်တဲ့ ဗန်ပါစီရဲ့ဂိုးဟာ သရဲနီတပ်ဖွဲ့ကို အသက်သွင်းပေးခဲ့ပြီး ၀ဲလ်ဘက်ရဲ့ အနီးကပ် ပိတ်သွင်းမှုကနေ ဒုတိယဂိုး ထပ်ရခဲ့ချိန်မှာ အနိုင်သေချာသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်း ၇၂မိနစ်မှာလည်း ဗန်ပါစီရဲ့ ဧရိယာထိပ် ကန်ချက်ဟာ မန်ယူအတွက် တတိယဂိုးဖြစ်စေခဲ့ပြီး နောက် ၁၀မိနစ်အကြာမှာ ကစားသမားသစ် ဘိုနီက ဆွမ်ဆီးအတွက် တစ်ဂိုးပြန်ချေပခဲ့ပေမယ့် ၀ဲလ်ဘက်ရဲ့ ဂိုးတိုင်၊ ဂိုးဘား ဆုံမှတ်ကြား ပင့်တင်မှုကနေ မန်ယူတို့ ပွဲသိမ်းဂိုးရခဲ့တာပါ။ ဒီပွဲမှာ အသင်းပြောင်းမယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့တဲ့ ရွန်နီ လူစားဝင် ကစားခဲ့ပေမယ့် ခြေစွမ်းပြနိုင်ခြင်း မရှိသလို မန်ယူ ဂိုးရချိန်မှာ အောင်ပွဲမခံခဲ့တာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
တရုတ်တွင် အပူချိန်မြင့်မားဒဏ်ကို ဆိုက်ဘေးရီးယား ကျားများ ခံစားနေရ
7:37:00 PM Myanmar News Updates No comments
ပင်ကိုယ် သဘာဝအရ အေးမြသော ရာသီဥတုကို နှစ်သက်လေ့ရှိသည့် အဆိုပါ ကျားကြီးများသည်ရှန်ယန်းရာသီဥတုကြောင့် နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်လာကြသည်
တရုတ်ပြည်တွင် ရာသီဥတု အပူချိန် မြင့်မားလာသည့်နောက် ဆိုက်ဘေးရီးယား ကျားများသည် ၎င်းတို့၏ ပင်ကိုယ် သဘာဝ နည်းလမ်းမျိုးနှင့် မဟုတ်ဘဲ အအေးဓာတ်ကို ရှာဖွေနေရသည်။ ရုရှားနိုင်ငံ၊ ဆိုက်ဘေးရီးယား ဒေသတွင် ဖမ်းဆီးရမိသည့် ကျားကြီး(၃)ကောင်သည် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ရှန်ယန်းရှိ ဂိုင်ပို ကျားဥယျာဉ်သို့ လွှဲပြောင်း ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ပင်ကိုယ် သဘာဝအရ အေးမြသော ရာသီဥတုကို နှစ်သက်လေ့ရှိသည့် အဆိုပါ ကျားကြီးများသည် ရှန်ယန်းရာသီဥတုကြောင့် နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဥယျာဉ်မှ ဝန်ထမ်းများက လှောင်အိမ်ထဲသို့ ရေခဲတုံးများ ထည့်ပေးခဲ့ရသည်။ ကျားကြီးများသည် ကြီးမားသော အဆိုပါ ရေခဲတုံးကြီးများကို လျှာဖြင့်လျက်ရင်း အအေးဓာတ် ရယူခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ အခြေအနေသည် ဆိုက်ဘေးရီးယား ကျားများ၏ သဘာဝ အလေ့အထမျိုး မဟုတ်သော်လည်း ကျားကြီးများ အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ဖြင့် အပူဒဏ် သက်သာအောင် တတ်စွမ်းသ၍ ကြိုးစားကြခြင်း ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဒေသကြီး (၈)ခု၌ (၂၅)ရက် ကြာသည်အထိ ဆက်တိုက် (၃၅)ဒီဂရီ ဆဲလ်ဆီးရပ်စ်အထက် ပျမ်းမျှအပူချိန် ရှိနေခဲ့သည်။ ယင်းသည် (၁၉၆၁)ခုနှစ်နောက်ပိုင်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပူပြင်းသော နေ့ရက်များ ဆက်တိုက်ရှည်ကြာသည့် စံချိန်လည်း ဖြစ်လာသည်။ တရုတ်မီဒီယာများကမူ ကျားကြီးများသည် ရာသီဥတု ပူပူတွင် ကိုယ်ပိုင် ရေခဲလော်လီပေါ့နှင့် ဟန်ကျနေကြောင်း အရွှမ်းဖောက် ရေးသားခဲ့သည်။
ဆိုက်ဘေးရီးယား ကျားကြီးများသည် တစ်ချိန်က အာရှမြောက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကျက်စားခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင်မူ တစ်စထက်တစ်စ မျိုးသုဉ်းလာပြီး ဆိုက်ဘေးရီးယား အရှေ့ဘက်ပိုင်းနှင့် ဗလာဒီဗော့စတော့ မြောက်ပိုင်းတို့တွင်သာ ကျန်ရှိတော့သည်။ ယခုအခါ ဆိုက်ဘေးရီးယား ကျားများကို မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်လု စာရင်းထဲတွင် ထည့်သွင်းထားပြီ ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံး ကြောင်မျိုးနွယ်များ ဖြစ်ကြပြီး သမင်များ၊ တောဝက်များနှင့် ဝက်ဝံညိုများကို အမဲလိုက် စားသောက်လေ့ရှိသည်။
ဆိုက်ဘေးရီးယား ကျားတို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချိန်အများစုကို ဆီးနှင်းဖုံး ဒေသများတွင် ဖြတ်သန်း ရှင်သန်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော ကျားမျိုးစိတ်လည်း ဖြစ်သည်။ တောက်ပသော လိမ္မော်ရောင် ကိုယ်ထည်တွင် အနက်ကျားကြီးများ ရှိနေသည့် ခန့်ညားသော သတ္တဝါကြီးများသည် သဘာဝအတိုင်း ရှင်သန်နေသည့် အရေအတွက် (၃၅၀)မျှသာ ရှိတော့သည်။
အထူးသဖြင့် မှောင်ခိုဈေးတွင် ဈေးကောင်းရခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့သည် ကျားလိုက်မုဆိုးများ၏ ပစ်မှတ်လည်း ဖြစ်လာသည်။ ကျားတစ်ကောင်အတွက် ပေါက်ဈေးသည် မှောင်ခိုဈေးကွက်တွင် ပေါင်စတာလင် သုံးသောင်းမျှထိ ရရှိတတ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းတို့၏ အရိုးများသည် တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးများတွင် အသုံးပြုလေ့ ရှိပြီး လှပသော သားရေများကို ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများ၏ နေအိမ်တွင် တန်ဖိုးကြီး အလှဆင် ပစ္စည်းအဖြစ် ထားရှိတတ်ခြင်းကလည်း ဆိုက်ဘေးရီးယား ကျားများကို ပိုမို၍ ကံဆိုးစေခဲ့သည်။
6:10:00 PM Myanmar News Updates No comments
ယောက်ကျားယူချင်၍ အရပ် ၁၄ လက်မပို ရှည်အောင် ခွဲစိတ်ခဲ့သောမိန်းကလေး
6:05:00 PM Myanmar News Updates No comments
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု မန်ဆာချူးဆက် ပြည်နယ်မှ ခြေထောက်နှင့်လက် သာမန်ထက် ပိုတိုနေသော အမျိုးသမီး တစ်ဦးသည် အရပ်ပိုမို ရှည်ထွက် လာစေရန် ခွဲစိတ်မှု နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ ပြီးနောက် အရပ် ၁၄ လက်မ ပိုရှည်ထွက် လာကာ သူမ၏ ချစ်သူနှင့် လက်ထပ်ပွဲ ဆင်နွှဲ နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သူမသည် ခြေလက် အင်္ဂါများကို ခွဲစိတ်သည့် ပထမဆုံးသူ ဖြစ်ကြောင်း သူမအား ခွဲစိတ် ပေးသည့် ဆရာဝန် များက ပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည် အသက် ၈ နှစ်အရွယ်က ခြေထောက်များ ရှည်ထွက် လာစေရန် အတွက် ခြေသလုံး ရိုးအား ချိုးပြီး အရိုးများ ရှည်ထွက် စေရေး အနာခံ ခွဲစိတ် ကုသမှု ခံယူခဲ့ ရသည်။ ၎င်း၏ အရိုးသည် ပထမ အကြိမ် ခွဲစိတ်စဉ် ၁ဝ စင်တီမီတာ ရှည်ထွက်ခဲ့ပြီး အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်တွင် ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်မံ ခွဲစိတ်၍ အရိုးများကို ဆန့်ထုတ်ခဲ့ရာ ၂၅ စင်တီမီတာ ရှည်ထွက် လာခဲ့သည်။ နှစ်ကြိမ် ခွဲစိတ်ပြီး အရပ် ရှည်ထွက်စေရန် ဆောင်ရွက် ခဲ့ရာတွင် အပြင်းအထန် နာကျင်မှု၊ အခန့် မသင့်လျှင် မသန် မစွမ်း ဘဝသို့ ရောက်ရှိ နိုင်သည်ကို မမှုဘဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ အသက် ၃၂ နှစ် အရွယ် ရှိပြီဖြစ်သည့် တစ်ဖနီ ဒီဒိုနာတိုသည် ဆန်းသစ်သော သူမ၏ ခွဲစိတ် ကုသမှု အကြောင်းကို Daily Mail သတင်းစာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည် အရပ် အနည်းငယ် ပိုရှည်ခဲ့ သော်လည်း သူမအတွက် ထိုအရာမှာ မလွယ် ကူကြောင်း၊ အိပ်ရာထတိုင်း နာကျင် မှုကို ဆိုးရွားစွာ ခံစားရလေ့ ရှိကြောင်း တစ်ဖနီက ပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည် ၎င်း၏ချစ်သူ မရိန်း တပ်သားနှင့် လက်ထပ်ပြီး သားတစ်ယောက် ရရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ သူမ၏ ပြင်းပြသော ဆန္ဒဖြင့် အရပ် ရှည်ထွက်အောင် ခွဲစိတ် ကုသမှု ပြုလုပ်ရာတွင် ဖြစ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ် များကို သူမ၏ စိတ်ဓာတ်ဖြင့် အခက်အခဲကို ကျော်လွှား နိုင်ခဲ့သည်မှာ အံ့သြ ဖွယ်ရာပင် ဖြစ်သည်။
5:58:00 PM Myanmar News Updates No comments
For Windows7၀င်းဒိုးရဲ့ ညာဘက်အောက် (notification area) မှာ
Speaker ပုံလေးနဲ့ အသံအတိုးအကျယ် လုပ်တဲ့ နေရာလေးမှာ Right Click နှိပ်>>Recording Devices ကိုသွား
ပေါ်လာတဲ့ box ထဲက လွတ်နေတဲ့ နေရာမှာ Right Click နှိပ်ပြီး Show Disabled Devices ဘေးနားမှာ Enable အမှန်ခြစ်လေးပေးလိုက်ပါ။
ပေးလိုက်ပြီးတာနဲ့ Disabled လုပ်ထားတဲ့ devices လေးတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ပေါ်လာတဲ့ devices တွေထဲကနေမှ
Stereo Mix ကို right click ခေါ်ပြီး Enable ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် မှိန်နေရာကနေ လင်းလာပါလိမ့်မယ်။ သူ့ ဘေးနားမှာ အစိမ်းရောင်အမှန်ခြစ်ကလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုပြင်ဆင်တာ ပြီးပါပြီ။
အင်္ဂလိပ်လို့ အပြည့်အစုံနာမည်ကတော့ Museum of Broken Relationships ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကွဲသူ၊ ချစ်သူနဲ့ ကွဲရသူတို့ အားလုံး အနေနဲ့ ၎င်းတို့ ရဲ့  ပစ္စည်းကို ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။ ရိုးရိုးတန်း တန်း တော့ မရပါဘူး။ ဥပမာ- စာရွက်ပြချင်တယ်ဆိုရင် ယင်းစာရွက်ဟာ ဘယ်နေ့က သူနဲ့ ဘယ်လို ပြဿနာ တက်ပြီး ရေးခဲ့တာ၊ ဆွဲဖြဲခဲ့တာ အစရှိတဲ့ အကြောင်းပြချက် စုံလင်စာနဲ့ တင်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က အသည်းကွဲ သူတို့ရဲ့  အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ လာပြလို့ရပါတယ်။ ယခုသုံးနေတာ မဟုတ်ပဲ။ အတူနေထိုင်စဉ်၊ ချစ်နေစဉ် သုံးခဲ့တာတွေ၊ အိမ်ထောင်ကွဲ ခါနီး ပြဿနာတက်တော့ သုံးခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အစရှိသဖြင့် စုံလင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆိုရင် သူ့ယောင်္ကျားနောက်မိန်းမ တစ်ယောက်နဲ့ ကြိတ်ပုန်းခုတ်လို့ သိတဲ့အခါ လိုက်ခုတ်ခဲ့တဲ့ ပေါက်စိန် ကိုတောင် တင်ပြ ထားပါတယ်။ ပန်းအိုးခွဲတယ်ဆိုလည်း ကွဲတဲ့ ပန်းအိုးက တင်ပြပါတယ်။ အကြောင်းအရာများလည်း ရေးသားပြသ ထားပါတယ်။
သို့ပေမယ့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက အမြည်းသဘောအနေနဲ့ စတင် ပြသ ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက လူကြိုက်များခဲ့ တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်အပါဝင် လူဦးရေ သိန်းနဲ့ချီပြီး လာရောက်ကြည့်ရှုပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့လည်း ပြခန်းနဲ့ လုပ်ပြီး ပြသ ရာ အောင်မြင်ခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။Museum of Broken Relationships ကို တည်ထောင်တဲ့ လူ ၂ယောက် ကလည်း Zagreb မြို့ ခံ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးနဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ဥရောပ ပြတိုက်ဖိုရမ်ကပေးတဲ့ ဥရောပရဲ့ အထူးခြား ဆုံး ပြတိုက်ဆု ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
5:50:00 PM Myanmar News Updates 1 comment
သင့်ရဲ့ချစ်သူ ဒါမှမဟုတ် ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်က ဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်နေတယ် ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိချင်ပါသလား။ အခုပေးမယ့်
“Spy on your cheating husband”ဖုန်းဆော့ဝဲလေးကိုသာ သူ့ဖုန်းထဲမှာ သူမသိအောင် install လုပ်ပေးထားလိုက်ပါ။ ဒီဆော့ဝဲလေးကို သူ့ဖုန်းထဲမှာသွင်းပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ နောင်ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဖုန်းကနေ သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကို call (or) #call လို့ ရိုက်ပြီး message ပို့လိုက်တာနဲ့ ဟိုဘက်ဖုန်းကနေ ကိုယ့်ဖုန်းဆီကို ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူ ၊ ခင်ပွန်းဇနီးသည်ပြောထားတဲ့ ဖုန်း Call Log( ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်း) ကို message အနေနဲ့ auto ပြန်ပို့ပေးမှာပါ။
သူဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာသိချင်ရင်တော့ ခုနကလိုပဲ သူ့ဖုန်းကို #locate လို့ရိုက်ပြီး message ပို့လိုက်တာနဲ့ သူရောက်နေတဲ့တည်နေရာကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ Google Map မြေပုံလင့်တစ်ခု ကိုယ့်ဖုန်းဆီကို auto message ပြန်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုပြန်ပို့ပေးဖို့အတွက် ဟိုဘက်ဖုန်းထဲမှာသွင်းပေးထားတဲ့ Spy on your cheating husband ဆော့ဝဲထဲမှာ message လက်ခံမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးထားရပါမယ်။ Spy on your cheating husband ကိုဖုန်းမှာသွင်းလိုက်ရင် ဖုန်းမှာ Software Updater ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ app လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါမယ်။
အဲဒီထဲကိုဝင်လိုက်ရင် Last Update Check ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရပါမယ်။ အဲဒါကို ငါးချက်ဆက်တိုက်(ခပ်သွက်သွက်)နှိပ်လိုက်ပါ။ message ပို့တာကိုလက်ခံမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ရတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပါမယ်။ Response Phone Nu
mber ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ဖုန်းကနေ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း # locate တို့ # call တို့ရိုက်ပြီး message ပို့ပြီး ထောက်လှမ်းနိုင်ပါပြီဗျာ။ Spy on your cheating husband v1.0.1 apk for Android ဆော့ဝဲကို အောက်က link မှာရယူပါ။
Spy on your cheating husband v1.0.1 apk for Android (Link 1)
Spy on your cheating husband v1.0.1 apk for Android (Link 2)
(ဒီဆော့ဝဲကိုသုံးဖို့ အင်တာနက်မလိုပါ ။ ကိုယ့်ချစ်သူဖုန်းထဲမှာ ဆော့ဝဲထည့်ထားဖို့နဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကို အဲဒီဆော့ဝဲထဲမှာထည့်ထားဖို့ပဲလိုပါတယ်)